Ministère de l'Environnement et du Développement Durable | République de Madagascar 31 MAY : ANDRO MANERAN-TANY TSY IFOHANA SIGARA SY TSY IHINANANA PARAKY – Ministère de l'Environnement et du Développement Durable
31 MAY : ANDRO MANERAN-TANY TSY IFOHANA SIGARA SY TSY IHINANANA PARAKY
« Sigara sy paraky, loza mitatao ho an’ny tontolo iainantsika »
Io no lohahevitry ny fankalazana tamin’ity 2022 ity izay niompana amin’ny fiarovana ny tontolo iainana.
Loza mitatao amin’ny tontolo iainana ny famokarana sigara sy paraky satria dia mahatratra 3,5 tapitrisa hekitara isan-taona ny tany simba manerana izao tontolo izao vokatry ny fanaovana tavy hambolena paraky . Maro ny hazo tapaka sy ny ala simba vokatr’izany izay manimba ny tontolo iainana.
Misy fiantraikany ratsy eo amin’ny fahasalamana ihany koa ny fifohana sigara sy fihinanana paraky satria dia miisa 8 300 isan-taona ny olona maty eto Madagasikara vokatr’izany.
Ho fanamarihana ity andro ity dia nisy ny hetsika fanentanana amin’ny ady amin’ny fifohana sigara sy fihinanana paraky notanterahina manoloana ny CHUJRA Ampefiloha izay nandraisan’ny MEDD anjara.